माओवादी हराएको सूचना ! | ImageKhabar <!-instant articles-->
सन् १९४९ देखि १९७६ सम्म अध्यक्ष माओले आधुनिक चीन निर्माणमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, सामर्थ्य र ल्याकत खर्च गरे जसको फलस्वरुप चीन आज विश्व महाशक्ति राष्ट्रको पहिलो नम्बरको दावेदारी प्रस्तुत गर्दैछ । माओ तत्कालिन समय २० औं शताब्दीका संसारका सबैभन्दा प्रभावशाली १०० ब्यक्तिमा पर्न आउँछन् । कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ र महान प्रशासकको रूपमा चिनिन्छन् । यद्यपी, नरसंहारकर्ताको रूपमा माओत्सेतुङ बिबादास्पद र चर्चामा नै छन । उनको कार्यकालमा सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा करोडौं मान्छे अकाल हताहत भएको विश्वास गरिन्छ । तथापि उनको आधुनिक चीन, समुन्नत चीन बनाउने उदेश्य र धेयको अघिल्तिर मान्छे मारिएको घटना, परिघटना गौंण सम्झिएको छ या सम्झन बाध्य पारिएको छ त्यो पीडितको भोगाइको पक्ष हो ।
मार्क्सवादी, लेनिनवादी विचारधारालार्इ सैनिक रणनीतिमा जोडिएको अध्यक्ष माओको सिद्धान्त माओवाद भनेर बुझिन्छ । बुझाइन्छ । पढ्नेहरू छन, पढाउनेहरु छन् । त्यसको अभ्यास गर्नेहरू छन । नेपालमा जति पनि कम्युनिस्ट नामधारी दोकान छन तिनीहरूमा माओवाद नामक सिद्धान्त सजाउने र सँधै वेचिने चिजबिज हो । सोकेसको सबैभन्दा आकर्षक वस्तु हो । पदार्थ हो, जसको धेरै भन्दा धेरै बिज्ञापन देख्न सुन्न र हेर्न पाइन्छ । आफूलाई देशको एक नम्बरी या भनौं अकबरी माओवादी र माओवादको असल अभियन्ता, अभ्यासकर्ता र प्रवक्ता सम्झने पार्टी थियो प्रचण्डले चलाएको कम्युनिस्ट पार्टी जसले क्रान्तिको उदघोष गर्‍यो र १७ हजार नेपालीको बलिदानले नेपाली माटो रक्तिम बन्यो । क्रान्तिकारीहरुको देशलाई रगत पच्छे बनाउने सपना सफलीभूत बन्यो । तर देशले जुन गति लिनुपर्ने थियो देश जहाँ पुग्नुपर्ने थियो त्यहाँ पुग्न सकेन् । राजा फाल्नु र संघीय गणतन्त्रमा देश रुपान्तरण हुनुभन्दा अरु उपलब्धि, प्राप्ती शून्य रह्यो ।
वि.स.२०५१ देखि २०५८/०५९ सम्म माओवादीलेजे सिकायो जुन कुरा बतायो जुन अभ्यास गरायो त्यो जनताले बुझेको माओवाद थियो । जनता चीनका माओको माओवाद बारेमा होइन यहाँ माओवादी भनेर जे गरियो, जे भनियो त्योबारे बुझ्छन र प्रचण्डले अभ्यास गराएको माओवाद सम्झन्छन, खोज्छन् । गाउँ टोल, देशको कुना कुना पुगेर जे बोलियो स्कुलका भित्तामा जे नारा लेखियो त्यो हेर्छ्न त्यो खोज्छन् । माओवादीले थुप्रै र थुप्रैलाई अनाहकमा ज्यादती पनि गरे, धेरैको जिन्दगी बर्बाद नै पनि पारे । हजारौं परिवार विघटन र तहस नहस पनि बने । धेरैको आत्महत्या र विरक्तिको कारण पनि बन्यो तथाकथित जनयुद्ध तर पनि केही सकारात्मक कुराको संकेत र शुरूवात पनि भएको थियो । राजतन्त्रको जरा हल्लाएको र हांगा बिंगा काट्ने कामको श्रेय तत्कालीन माओवादीकै भागमा जान्छ ।
हिजो धनीको खोसेर गरिबलाई बांडनेहरु किन आज सबै सेवा सुबिधा आफ्नो र आफन्तको भागमा मात्र खन्याउन मरिहत्ते गरेर लागि परेका ? बैधानिक रूपमा माओवादी सिद्दीएको धेरै भएको छैन तर आफ्नो पहिचान र अस्तित्व हराउँदै गएको भने २०६२/०६३ पछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशसँगै हो । जसका विरुद्द र जुन प्वृति विरुद्ध माओवादीले जेहाद छोडेर युद्द गर्यो त्यो प्रवृति भने आफूमा पुनरावृत्ति गर्यो । चुनाव जित्ने र भोट पाउने नाममा गर्नु–नगर्नु हुने–नहुने सबै गर्यो । साम, दाम र दण्डभेद सबै अपनाएर चुनाव पनि जित्यो । सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि बन्यो तर दम्भ र अहंकार बोकेर अभिमानको सगरमाथा चढ्नाले अस्तित्व नै संकटग्रस्त बनेर खर्पसमा भासियो र २०७५ सालमा बिधिवत बिगठनमा पुग्यो । माओवादी आफू मात्रै विघटनमा परेन एमालेलाई पनि पार्टी एकीकरणको नाममा पहिचान बिहिन बनाउन सफल भयो । आफू भासिएको खर्पस्मा एमालेलाई पनि तान्न सक्यो ।
माओवादी सकियो छैन र अब हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ ‘माओवादी हरायो’को सूचना सार्वजनिक रूपमा सबैले थाहा पाउने गरी उल्लेख गर्न मजबुर बनियो । हिजो जुन–घाम रहुन्जेल माओवाद यो धर्ती (नेपालमा) रहन्छ भन्ने गर्जन आज पानीको फोका झै फुटेर सून्यमा हराएको देख्दा राजनीतिको सबैरुप कति सजिलै कुमालेको चक्र झैं देखिन्छ । घमण्ड र अभिमान जोसुकैले जतिबेला गरे पनि यसको रंग कसरी खुइलिन्छ भन्ने उदाहरण नेपाली राजनीतिले चरितार्थ गरेको र अझै गर्ने कुरा कसैले नबिर्सेकै राम्रो । तत्कालिन माओवादी भित्रको सपना, संकल्प, चुस्तता, साहस, आँट केही गरेर नै छाडने अठोट, बेगवान गति सबैसबै हराएर आज अस्तित्व नै संकटमा पर्नु निस्चय नै राजनीतिको गलत नियत र नियतिको खेलको प्रभाव हो भनेर बुझ्दा अन्यथा नहोला, मैंले यसैगरी बुझें । आफ्नो उपस्थिति देखाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई तथानाम गाली गरेर बस्नुले हिजोको माओवादी पक्कै हराएकै हो भन्ने ठहर रह्यो ।